Imandarmedia.com.np: माओवादीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवास घेरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डबिरुद्ध सेना परिचालन गर्न निर्देशन !
Big News, Main News, Political » माओवादीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवास घेरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डबिरुद्ध सेना परिचालन गर्न निर्देशन !
माओवादीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवास घेरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डबिरुद्ध सेना परिचालन गर्न निर्देशन !
नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवास घेरेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिरुद्ध सेना परिचालन गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन् ।
बाम एकता मेरो प्रयास थियो
नेपालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला माओवादीसँग तीन बुँदे सहमति भएको बताए । उनले भने ‘सहमति कार्यान्वयन गर्नु पर्दथ्यो, त्यो गलत हो, तर प्रचण्डजीले पनि आत्तिएर निर्णय लिनु भयो, त्यो पनि गलत भयो ।’